सनसिटी अपार्टमेन्टमा कोरोना आशंका गरिएसँगै ४ सय परिवार त्रासमा, बैंकर पनि जोखिममा – Everest Pati
काठमाडौँ, २ वैशाख । काठमाडौंको पेप्सीकोला टाउन प्लानिङस्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा रहेका तीन जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको आशंका गरिएसँगै सो अपार्टमेन्टका सयौँ परिवार त्रासमा छन् ।
आशंका गरिएसँगै प्रहरीले सो क्षेत्रलाई सील गरेको छ । यस घटनापछि अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका झण्डै ४०० पारिवार त्रासमा रहेका छन् ।
अपार्टमेन्टमा बस्ने एकै परिवारका ३ जना सदस्यमा गरिएको र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्टको नतिजा पोजेटिभ देखिएपछि उनीहरुलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । उनीहरु झन्डै एक महिनाअघि लण्डनबाट फर्किएको बताइएको छ ।
सनसिटी अपार्टमेन्टको १५ औं तलामा बस्ने आमा, छोरा र बुहारीको ¥यापिड डायग्नोस्टिक टेष्ट किटबाट परीक्षाण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो ।
अहिले उच्च सताकर्ता अपनाउन प्रहरी तैनाथ गरिएको छ। त्यस अपार्टमेन्ट बस्दै आएको करिब ४०० परिवार त्रासमा परेका छन् । त्यहाँ एक दर्जन बढी त बैंकरहरु मात्र बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । लकडाउनमा पनि बैंक जाने आउने गरेका उनीहरु सबैको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयबासीले बताइरहेका छन् । त्यस अपार्टमा आउजाउ गर्ने र शंकास्पदहरुको पनि परीक्षण हुनुपर्ने केहीले बताएका छन् ।
साथै सो अपार्टमेन्टसँग जोडिएका ३ बैंकका एटिएमहरुमा जानेहरुले सतर्कता अपाउन र शंका लागेमा परीक्षण गर्न सुझाव दिइएको छ ।
लेखक समेत रहेका सौरभ कार्कीले आफू पनि त्यहाँस्थित नबिल बैंकको एटिएम गएर आएको बताउँदै आफू लगायत त्यहाँ बस्ने सबैको कोरोना चेक गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
उनले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा नै सो अपार्टमेन्टमा गएको भन्दै उनको पनि कोरोना टेस्ट हुनुपर्ने र स्थानीय बासी सबैको परीक्षण हुनुपर्ने बताएका छन् ।
कार्कीले अर्काे स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा केही दिनअघि सनसिटी अगाडि आएका रहेछन । अर्थमन्त्री पनि जोखिममा भन्दैगर्दा काँडाघारी बासी चै के ? के तिनिहरुलाई चै जोखिम छैन ? त्यस बिल्डिङ्गमा तिनवटा एटिएम बुथ जोडिएका छन । अपार्टेमेन्ट अगाडि तरकारी पसलहरु छन जो बिहान को समयमा खुल्ने गर्छन् । अपार्टेमेन्टबाट पैदल ३० सेकेन्डको दुरीमा दुइवटा मेडिकल छन, जहाँ औषधि किन्न मानिसहरुको ओहोरदोहोर हुने गर्दछ । अर्थमन्त्री को चेकजाँच हुने अब हाम्रो चेकजाँच नहुने त होला ? कि के व्यवस्था छ सरकार ?
विदेशबाट आएकाहरुका कारण नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दो क्रममा
आजको राशिफल : वैशाख २ गते, मंगलबार